The Irrawaddy's Blog: ဖားမင်းဆွေ၏ အံ့မခန်း ရိုက်ပေါက်များ
- စစ်အစိုးရ အကြိုက် ဆောင်းပါးတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ ငါးမင်းဆွေ (ဖားမင်းဆွေလို့လည်း နောက်ပြောင်ခေါ်ကြတယ်။ ဖားလွန်းလို့တဲ့) ဟာ ဒီနေ့ ၁၁ နာရီက NLD ရုံး ရှေ့မှာ “ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နားမျက်စိ မပိတ်ပါနဲ့” ဆိုတဲ့ စာတန်းပါ တီရှပ်အဖြူရောင် ၀တ်ဆင်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နားက လူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မပြလို့ လို့ ဆိုပါတယ်။
ငါးမင်းဆွေဟာ မနေ့က “ ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်စုကြည်သို့ (၂)” ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခနဲ့ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို NLD ရုံးကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီဆောင်းပါး ပေးမဖတ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း NLD ရုံးချုပ်က ဦးဝင်းထိန်က ငါးမင်းဆွေဆီ ဖုန်းဆက် ပြောတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါးမင်းဆွေက ရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒလာရောက် ထုတ်ဖော်ရတာပါတဲ့။
“သူ့ဆောင်းပါးတွေက ကျနော်တို့ ထောင်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒီမိုကရေစီအတွက် လုပ်နေတဲ့ လူတွေကို အရမ်းစော်ကားထားတဲ့ စာတွေချည်းပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငါးမင်းဆွေကို မသိဘူး။ မနေ့က စာမှာလည်း စော်ကား ထားတာတွေပါလို့ လက်မခံတာ” လို့
ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသော ငါးမင်းဆွေကိ်ု ၁၂နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ NLD ရုံးချုပ်ထဲကို ခေါ်ယူပြီး ဦးဝင်းထိန်က ညှိတဲ့အခါမှာ တော်တော်လေး အချေတင် စကားများပြောခဲ့ကြရပါတယ်။
“ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်စုကြည်သို့(၂)” ဆောင်းပါးမှာ ဒေါ်စုကြည်ဆိုတဲ့ အရေးအသားကို ပြင်ပေးဖို့ ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာ ငါးမင်းဆွေက
ပြန်ပြင်ဆင်ရေးသားပေးမယ် ဒါပေမယ့် သူ့ဆောင်းပါးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ထဲ ထည့်ပေးရမယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ “ဒေါ်စုဆီ ပို့ထားတဲ့ စာတွေကတပုံကြီး သူဖတ်တာ မဖတ်တာက ကျနော်မသိဘူး” လို့ ပြောပြီး ဦးဝင်းထိန်က စကား ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကိုငါးမင်းဆွေက NLD ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တွေကိုသာ ဝေငှပါတယ်။
အဲဒီ ဆောင်းပါးစာရွက် အောက်မှာတော့ “ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်များ သို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရန်” လို့ ရေးပြီး လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာရွက်တွေလည်း ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မော်နီတာ ဂျာနယ်မှာ ပါဝင်ပြီးသား သူ့ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ရုံးချုပ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဝေပါသေးတယ် (တော်တော်လေး မြို့မေတ္တာ ခံယူချင်ပုံပဲ)
“ကျနော်က အစိုးရကို ဘက်လိုက်ပြီး ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် ရေးသမျှစာတွေက ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ်ရေးတာကပါ။ တချို့
ဆောင်းပါးတွေဆို မျက်ရည်ကျပြီး ရေးခဲ့တာ” လို့ ငါးမင်းဆွေက ရုံးချုပ်ရှေ့က သတင်းထောက်တယောက်ကို ပြောပါတယ် (ကြည့်ရတာ ရေးရင်း မျက်စိထဲ ပိုးကောင်တွေဘာတွေ ဝင်သွားလားမသိဘူး)
အဲဒီ ငါးမင်းဆွေဟာ ကြေးမုံနဲ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွေမှာလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက “၇၅ မင်းဆွေမှ ၈၈ မင်းကိုနိုင်သို့”
ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို စရေးခဲ့ပြီး “ငရဲမင်းနှင့် ငမင်းဆွေ”၊ “ငါးမင်းဆွေမှ စုကြည်သို့”၊ “စာရေးဆရာသည် လူမုန်းခံရ အသတ်ခံရ၏”၊ “ကုန်ဈေးနှုန်း ကျချင်သလား မီးမှန်ချင်သလား”၊ ”ရာဇ၀င်လူဆိုး”၊ “ဖားမင်းဆွေ စက်ဘီးစီးနေသည် လမ်းဘေးဖုန်းသုံးနေသည်”၊ ” ဘယ်သွားနေလဲ မင်းကိုနိုင်”၊ ”တော်ကြပါတော့ဗျာ သွားကြပါတော့ဗျာ”၊ “အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်ချင်ပါသလား” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို စော်ကားထားပါတယ် (ဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်တွေကိုက ရိုက်ချင်စရာ လေးတွေပဲနော်)
နောက်ထပ် ရိုက်ပေါက် ဆောင်းပါးတွေလည်း ဆက်ရေးနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
NLD ရုံးရှေ့မှာသူ့ကို ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ သူတွေထဲက သူ့အကြောင်း မသိသေးတဲ့ သူတွေက သူဝေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး “အရူး” လို့ ပြောကြသတဲ့။ ငါးမင်းဆွေရဲ့ အံ့မခန်း အောင်မြင်မှုပေါ့။ သူ့အကြောင်း သိတဲ့သူတွေကတော့ ထိုင်ဆဲနေကြပါတယ်တဲ့။
ဖားမင်း ဆွေ ကိုဘပု ကို မကြားဖူးသေးဘူး ထင်တယ် ...အတင့်ရလိုက်တာ...(ဗိုလ် အောင်ဒင် ...လေသံဖြင့်) နောက်တစ်ခါ ချီးထုပ်က ခင်ဗျား အလှည့် ဖြစ်သွားမယ်နော်...(ဤနေရာတွင် တော့ God Father ဇာတ်ကားမှ Al Pacino လေသံဖြင့်)
November 25, 2010 at 3:11 PM
သူ့ရေးတာတွေ တချို့တလေ ဖတ်ဖူးတယ်။ လူကိုတော့ ခုမှ မြင်ဘူးတယ်။ ရုပ်ကြည့်ရုံနဲ့ ငကြောင်တယောက်ဆိုတာ သိသာတယ်။ အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ။ အဲဒီ လူ က ကြံ့ဖွတ် မဲခိုးတာ မဲလိမ်တာ တွေ ဘာမှ ရေးဖေါ် ပြောဖေါ် မရပဲ ဘယ့်နဲ့ ခုမှ အချုပ်အနှောင် က လွတ်ခါစ သူကို ဘာတွေ ရေးချင် ပြောချင်နေတယ် ဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ ဝံကြီးချုပ် ဆိုသူ ထိပ်ပြောင် သိန်းစိန် နဲ့ ဖါးပြုတ် ဌေးဦး နောက်ပြီး လမ်းတဝက်ခင်း အောင်သိန်းလင်း တို့ ကျတော့ ဘာမှ မရေးမပြောပါ ကလား။ အံ့သြစရာပဲ။ အေးလေ..ကိုယ်သမိုင်းကိုယ်ရေးကြတာပဲ ။
soe said... :
November 25, 2010 at 3:43 PM
ဒေါ်စ်ုဖတ်ပြီး လက်ခံတာ လက်မခံတာထက် ပြည်သူလက်ခံဖို့ကအရေးကြီးတာလေ သူ့ စာတွေကို ပြည်သူလူထုက လက်မခံလို့ဒီလူရူးသွားပြီ ထင်တယ် သူ့ ပထွေးတွေအကြိုက် သတ္တိရှိပြနေတာလေ သောက်ရူးကြီး
Whatapitty? He looks likeapsychopath.
သိပ်မိုက်ရိုင်းတဲ.ကောင်(ငါးမင်းဆွေ)အမေစုကို ခေါ်တဲ.စကားလုံးကကို ရိုင်းစိုင်းလွန်းပါတယ်.....ဒီလိုကောင်တွေ လူပြည်မှာရှိမနေသင့်ဘူး...........
November 25, 2010 at 4:45 PM
အေး အဲဒီအမြင်က တန်ဘိုးရှိပြီး မှန်ကန်ဖို့လိုတယ်... အရူးလို သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝ ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်ဟောင်မနေကြနဲ... အမြင်မတူရင် ရန်သူလား လို့နင်တို့ ဒီလို blog တွေမှာ ရေးခွင့် ရသလို အမြင်မတူတဲ့ ပြည်တွင်းဂျာနယ်လေးတစောင်လောက် ထုတ်ခွင့်ရအောင် နင်တို့ ပထွေး စစ်အစိုးရကို သွားပြောကြလေ
အမြင်မတူရင် ရန်သူလို. မဆိုလိုပါဘူး ဒါပေမယ်.သူရေးတဲ.စာတွေ သေချာဖတ်ပြီးပြီလား.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ.ထက်ဆယ်နှစ်လောက်ကြီးပါတယ်...အသက်အရွယ်ရပဲကြည်.ပါ.....မစုလို.ခေါ်စရာလား..
ဖာမင်းဆွေ လို့ ခေါ် သင.် ပါသည်
ရုပ်ကိုက ၇ိုက်ပေါက်ဆယ့်နှပေါက် တစ်ပေါက်မှမလွတ်တဲ့ရုပ်....
အဲဒီကောင်ရုပ်ကို မှတ်ထားကြ။ တွေ့တဲ့နေရာမှာရိုက်ကြ။ အဲဒီကောင်အိမ်ကို အီးထုတ်တွေနဲ့ပြစ်ကျ။
mu2ng said... :
November 25, 2010 at 7:30 PM
မင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုတောင်မခေါ်နိုင်ဘူလား။ သူနာမည်ကိုတောင်လေးလေးစားစား အပြည့်မခေါ်နိုင်တဲ့ မင်းစာကိုပေးမဖတ်တာ မလွန်ဘူး။
အာဏာရှင်းအစိုးရမင်းများကလည်း ဒီလိုဆန်ဒပြတာကျတောနှာစေးနေတယ်။ အဲလိုကိုယ်ဆန်ဒ ကိုယ်ဖေါ်ထုတ်လို့ မဖမ်းကြေးလို့စိန်ခေါ်လိုက်လေ။ မင်းတို့ရုံးရှေမှာလူ သိန်းချီမရှိရင်ကြိုက်သလိုပြော။
ငါးမင်းဆွေရေ မင်ရုပ်လဲမင်းပြန်ကြည့်ပါအုံး ကြံဖွတ်က ဆိုက်ကားသမား ဖားခေါင်းလူမိုက်ရုပ်ပေါက်နေတယ်။ NLD မို့လို့ဒီလိုကောင်မျိုး ရုံးထဲပေးဝင်ခံတာ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာဆို အဲလိုရုပ်မျိုးဆို တံခါးတောင်ဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
Automotive Mechanics said... :
November 25, 2010 at 8:17 PM
ပထွေးအားကိုး သေခြင်းဆိုးကို တွေ့တဲ့နေရာမှာရိုက် ဗျောင်ရိုက် ခြောင်းရိုက်
သူထက်ရူးတဲ့ သူတောင် သူလောက် မရူးဘူး ဒိလောက်မျက်နှာ ပြောင်တိုက်ရတာ ကလည်းကားပါမစ် လား တိုက်ခန်းလား တခုခု တော့ ရလို့ဖြစ်မှာပေါ့ ။ ရိုး နေပြီ။
November 25, 2010 at 9:32 PM
သူ့ ဆောင်းပါးကိဖတ်ရအောင်သူကဘယ်မှာသတင်းရေးနေလို့ လဲ။Fox news လား CNN လား။သူ့ အဆင့်ကဘယ်လောက်ရှိလို့ အမေစုကဖတ်ရမှာလဲ။အရှက်ကိုမရှိဘူး။
November 25, 2010 at 9:35 PM
ဖားမင်းဆွေတဲ့လား ရုပ်ကြည့်တာနဲ့ အဆင့်မရှိ ကြောင်တောင်တောင်ကောင်မှန်းသိသာပါတယ် သောက်ရူးကြီး
November 25, 2010 at 9:44 PM
ငါမင်းဆွေ ဟု့အမည်ခံထားသော ၄င်း စာရေးဆရား၏ biography ကို။ အသေးစိတ် တတ်နိုင်သမျှ သိတဲ့သူများက တင်ပြပေးကြစေလိုပါသည်။
may said... :
I think he may be crazy.
Don't let Min Swe, stupid guy come inside NLD headquarter.
သတိထားလုပ်ကြဟေ့ သူ့ပုံက brain washing အလုပ်ခံထားရပြီး ဆေးတခုခု သောက်ထားလို့ ကြောင်နေတဲ့ ပုံပဲ။ စွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က ရုပ်မျိူတွေ။ အခု သူလုပ်နေတာကို သူတောင် သိချင်မှ သိလိမ့်မယ်
ဆိုတာတွေကိုပေးဖတ်လိုက်ပါ။ ပေးမဖတ်ရင်NLD လူတွေအလွန်ဖြစ်မယ်။ ပေးဖတ်မှအန်တီစုကဘာဆက်လုပ်ရမယ်။ စစ်အစိုးရဖက်ကဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကွဲပြားမယ်လေ။
တူပါတယ်။ သေချင်ပြီနဲ့တူတယ်။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေရေးရုံမက
ခင်ဗျား ပင်လယ်ငါး စားဖို့ပဲ အကြံ ပေးချင်တယ် ပင်လယ်ငါးစားရင် ညာဏ်ရည်တက်တယ်လို့ စာထဲမှာဖတ်ဘူးလို့ပါ
အဲ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က ကျပ်မပြည့်ရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
ကြောင်တောင်တောင် အကွက်တွေနဲ့ အရူးကွက်နင်းပြီး ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်မဖြစ်ချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ
Hello, U Min Swe , if u r brave and confident enough and if ur knowledge, ur minds , ur political views r good enough, Here is just my suggestion:you should arrangeafree discussion with political leaders, junta,public (including you in free place (not in burma).How? Challenge!
Dont talk non sense like an idiot.
သူဟာသူ လုပ်ချင်တာလုပ်ပေါ့ ..
အညာသား said... :
နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူး...ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူရင် ဆက်ဆက်ထိမခံဘူး...ရန်သူလိုသဘောထားတယ်...
အာဏာမရသေးတာတောင်မှ အာဏာတွေပြနေကြပြီ...အာဏာများရရင် ဘယ်လောက်တောင် မောက်မာကြမလည်းမသိဘူး...
ဟေ့ ဒို့နိုင်ငံမှာ ဦးသန်းရွှေမလိုဘူး ဒေါ်စုကြည်မလိုဘူးကွ
ပြည်သူကို ပြည်သူတွေပဲ အုပ်ချုပ်လိမ့်မယ် မင်းတို့ကို ဘယ်သူမှ ခန့်မထားဘူး မင်းတို့ကို ဘယ်သူမှ နိုင်ငံကိုလုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။
ဒီပုပ်ထဲက ဒီပဲအာဏာရှူးတွေကို ကြည့်မရသူ
November 25, 2010 at 11:47 PM
သို့ ဖာမင်းဆွေ။ခင်းဗျားရဲ့အမြင်မတူတာကိုအမေစုကိုသွားပြောသလို၊ကျုပ်တို့အမြင်မတူတာရောဂျိုလ်ဂုတ်ဒူးကြီးကိုသွားပြီးအော်ပြောလို့ ရမလား။ခ
timothy said... :
ယဉ်လေးရူးနေတဲ့လက္ခဏာနဲ့လဲပြည့်စုံတယ်။ Saving Private ယက်ထော်ဆိုတဲ့စိတ်မနှံ့တဲ့ခပ်ရူးရူးအမေရိကန်ကောင်ကိုသုံးပြီး အမေစုရဲ့အိမ်အကျဉ်းချုပ်ကိုထပ်ပြီးတိုးခဲ့တဲ့ သန်းရွှေတို့ရဲ့မိန်းမရွှင်များတောင်မကြံအပ်တဲ့အကြံယုတ်ကိုလူတိုင်းမမေ့ဘူးလို့ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။
NLD ကလူကြီးများကို အမေစုလုံခြုံရေးအတွက်သတိပေးပါရစေ။
ဒီကောင်မျိုးက၊ရူးသလိုလိူ၊ပေါသလိုလိုနဲ့၊သန်းရွှေတို့လွှတ်ထားတဲ့လူသတ်သမား၊အမေစုကိုသတ်ဘို့အကြံနဲ့ NLD ရုံးထဲလက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ဝင်လာတာ၊ကြိုးစားနေတာဖြစ်ဘို့များတယ်။
ငါးမင်းဆွေ .... နောက်တစ်ခေါက် လာအော်ရင် NLD ရုံးရှေ့မှာ ရေအိုးတစ်လုံး ချပေးသင့်တယ်... အော်ပါစေ.. ပြည်သူတွေရေ.. ဒေါ်စု ပြောတယ်မလား..ငြိမ်းချမ်းရေးလေ.. ရေချပေးလိုက် တဘက်တထည်ပေးလိုက်..သူ့မှာ ဒေါသ လောဘ အမှန်ကို မမြင်နိုင်တဲ့ မောဟ တွေ ဖုံးလွှမ်းနေရှာတာကိုး...ရေသောက်လိုက် အော်လိုက် လုပ်ပါစေ.. ဖြစ်နိုင်ရင် ပြည်သူတွေက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောလိုက်ပါ..အကို အော်သာအော် ..အဲဒီရေအိုးပြည့်အောင်အော် ပုဝါမကူ ရေမရှုကြေးလို့.. အရှုးစိတ်ချမ်းသာရင် တိုင်းပြည်အေးချမ်းတယ်ဟုတ်...သူက မျက်ရည်နဲ့ရေးထားတာ ..သူ့မျက်ရည်မြေမကျပါစေနဲ့.. နဂိုကတည်းက ဆန်က ဈေးကြီးနေပြီ...သူဝေတဲ့ စာတွေလည်း တတ်နိုင်သမျှ များများယူထားလိုက်.. ရွှေဂုံတိုင် တ၀ိုက်မှာ ပလုံကောက်တဲ့ကလေးတွေ အနည်းဆုံး အလေးချိန်နဲ့ ပြန်ရောင်းစားလို့ရတယ်လေ..များများသာတောင်းပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပလုံကလေးတွေ မုန့်ဖိုးရတာပေါ့...အနဲဆုံး ဈေးထဲမှာ ဆနွင်းလေးဘာလေး ထုတ်လို့ရတယ်..သူ့ကို မဆဲမအော်နဲ့.. ပြည်သူတွေ သူနဲ့ တန်းတူမဖြစ်စေနဲ့လေ..အမေစုက သူ အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်တယ်ပြောပြီးသား..အဓိကက သူကို ရေအိုးပြည့်အောင်အော်ခိုင်း..စာရွက်များများယူထား..ကလေးတွေ ပျော်တာပေါ့ အလေးချိန်စီးလေ ပိုက်ဆံ ပိုရလေ...
အာရုံဦး said... :
တရုပ် နှင့် မြန်မာ အစိုးရ တွေဟာ ယနေ့အချိန်ထိ အာဏာရှင် ပုံစံနှင့် အုပ်ချုပ် နေဆဲပါ။
တရုပ် နဲ့မြန်မာ ဒီမိုကရေစီး လုပ်ရှားမှု့များသည် မရှေ့မနှောင်း ကာလ မှာပေါ် ပေါက်ခဲ့သော်လည်း တရုပ် နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့စီပွါရေးမှာ ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး ဘ၀ကနေ ရုန်းမထွက် နိုင်သေး တာကို စစ်အုပ်စု မှပြန်လည် သုံးသပ် သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်ပြည် ကိုယ့်လူမျိုး အပေါ် စေတနာ ထားကြပုံ ကွာခြား ကြပါတယ်။ ၂၂နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ အတိုင်းအတာ တခု လောက်တော့ တိုးတက် သင့်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် တွေဟာ အတ္တအလွန်တရာ ကြီးမား ကြတယ်လို့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများမှ သုံးသပ်လျှက်ရှိပါသည်။
ရေးတဲ့စာကိုတော့ ရိုက်ချင်တာကြာပါပီ လူကတော့ ခုတွေ့တာနဲ့ကို ရိုက်ချင်စရာ ဒါပေမဲ့လဲ အဲ့ဒီလို ရိုက်ချင်စရာလူကို တွေ့တိုင်း ရိုက်ခွင့်ရတိုင်း ရိုက်ကြကြေးဆို ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီသမားတွေလဲ အာဏာရှင်တွေပဲဖြစ်ကုန်ကြမှာပေါ့ ရိုက်ချင်ပေမဲ့လဲ သူ့ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခွင့် သူ့မှာလဲ ရှိပါတယ် ဒီမိုကရေစီဘက်ကသူတွေ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်တာကို တားမြစ်ထားပြီး အခြားသူတွေကို ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေက ဘက်လိုက်တဲ့ဥပဒေပဲ ဖြစ်တော့မှာပါ ဘက်လိုက်တဲ့ ဥပဒေကို ကျနော်တို့က မြင်သာအောင်သာထောက်ပြဖို့ တာဝန်ရှိကြတယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် ကျနော်တို့ လူတွေ သတိထားရမှာက ကျနော်တို့ လုပ်ရပ်က ဦးသန်းရွှေတို့ လုပ်ရပ်နဲ့ တူနေရင် ရေရှည်မှာ ပြည်သူလူထုကြီးအတွက် ရင်လေးစရာပါပဲ။ ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား
November 26, 2010 at 1:44 AM
you stupid crazy fool par min swe don`t do personal attack to daw suu who is sacrifised her life for burmese people better use your energy good to poor burmese people
သောက်ခွက်က ကလေကချေအုတ်ကြားမြက်ပေါက်လမ်းဘေးချီးယိုထမိန်သူခိုးရုပ်နဲ့ အောက်တန်းစား အပေအတေကပ်ဖားယက်ဖားကောင်။နင့်ရုပ်ကြည့်ရတာ အသေရေမရှိဘူး။
November 26, 2010 at 1:51 AM
burmese people don`t need like this crazy syupid fool phar min swe his name is animal name which is fish and frog that`s why you got animal brain
November 26, 2010 at 2:15 AM
in dermocracy way he can wright his idea but let people decide which side he stand.Burmese people gave him the best name for him as phar min swe whose daughter had better idea than him.How wonderful!
လေ့လာပါအုံး ငါးမင်းဆွေ http://www.mizzimaburmese.com/edop/3/244--.html
you must know your bad name phar min swe can never turn to good image in the eyes of burmese people.I think you`re trying to get Daw Suu`s attention because you hope you will get better chances if you can stay be her side.How shameful you are!!!!
November 26, 2010 at 3:58 AM
ငါးမင်းဆွေ ရဲ့အိမ်က လှိုင်မြင့်မိုရ်အိမ်ယာ မာတလိလမ်း ဘူတာရုံလမ်းမှတ်တိုင် လှိုင်မြို့နယ် ဖြစ်ပါတယ်
situ said... :
ဖုန်း နာပါတ်လေးသိရင်ပြောပေးပါ တင်ထားပေးခဲ့ပါ ဟယ်လီကော်ပတာမှောင်းပေးဖို့ပါ
u r from your stepfather nga shwe side?
November 26, 2010 at 7:42 AM
I feel shock.How many people in Burma who have such kind of stupid thought!!
November 26, 2010 at 8:23 AM
အမေစုကိုလည်းပြရန်မလိုပါ။အောက်တန်းစားတွေရေးထားတာတွေဖတ်ပြီး အမေစုစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်ပါ။ သို့သော်တခုတော့သတိထားစေချင်ပါသည်။
နအဖအုပ်စုကနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရန်စအကွက်ထွင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့ဆင်တဲ့အကွက်ထဲမ၀င်မိအောင်လိမ္မာပါးနပ်စွာရှောင်ရှားစေ လိုပါသည်။ (ဆက်လက်ချီတက်မည်ဒီမိုကရေစီ)
(နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူး...ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူရင် ဆက်ဆက်ထိမခံဘူး...ရန်သူလိုသဘောထားတယ်...
မင်းမှာလည်း ကြည့်ရတာ ကြံ့ဖွံ့ က ကောင်ထင်ပါရဲ့ကွာ..
မဲခိုး မဲလိမ်ပြီး သောက်ရှက်မရှိ ပြည်သူတွေကိုပြန်အုပ်ချုပ်ချင်သေးတယ်..
၉၀ ခုတုန်းက မဲနိုင်တာဘယ်သူတွေလဲကွာ...
မင်းမွေးပြီးပြီလား...မင်းအဘတွေက မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ကုလားထိုင်
ပေါ်က ဆင်းမပေးပဲနဲ့...ခုမှ ပြည်သူတွေဘာတွေ လာလုပ်နေသေးတယ်..
November 26, 2010 at 9:16 AM
ဘာလို့ သူက အတင်းကြီး ဖတ်ခိုင်းနေရတာလဲ ၊ သတင်းစာ မှာ သူဆောင်းပါးတွေ ပါတယ်ဆိုရင် ၊ အန်တီစု သတင်းစာဖတ်ရင် အလို လို တွေ့ ပြီး ဖတ်မိ မှာပဲ မဟုတ်လား ၊ သူဖတ်စေချင်တာကလည်း အတင်းပဲ ကြောက်စရာကြီး
November 26, 2010 at 10:23 AM
အန္တရာယ်ပြရှေ့ပြေးနိမိတ်အချက်ပြမှု တခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရူးသလို ကြောင်သလို အခြေအနေပုံစံမျိုးနဲ့ တပ်ပြေး၊ ရဲဘက်၊ ဖေါက်ခွဲရေးအကြမ်းဖက် သမားပုံစံနဲ့ လက်သည်မပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ အောက်လမ်းနည်းတွေလုပ်လာမှာသေချာပါတယ်။ ယက်ထောကိစ္စ၊ ဒီပဲယင်းကိစ္စများသာ ကြည့်ပါ။ NLD ရုံးချုပ်တခုလုံးကို ကျောင်းသားသမဂ်ဂ ဗုံးခွဲသလို လုပ်ကြံမှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ သတိကြီးကြီး နဲ့ လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားကြပါ။ အမေစုကိုကာကွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တောက်..တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်း ..အပြင်မှာတွေရင် လုံးချည်လှန်းပြမယ်...
၁၀/သဖ၇ (နိုင်) ၀၄၃၈၀၅
တိုက် ၁၄၊ အခန်း ၁၆
ဖုန်း - ၅၂၇၇၆၇၊ ၀၉ ၈၇၁၈၀၈၀
ငါးဆို၇င်လဲ ငါးဖျင်းသလက် ပဲဖြစ်မှာပါ
comment တွေအကုန်လုံး ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါနော်
ကို ဖားတပိုင်း ငါးတပိုင်းေ၇
မင်းအစား ငါရင် လေးတယ်...ကျော်စန်းခိုင်းသမျှ အကုန်လုပ် တော့တာပဲ......
ကျော်စန်းက မင်းကို NLD နဲ့ ညှိ အောင်လုပ်.. မင်းကသောက်တလွဲ နာမည် ကြီး.....ပြီးတော့ကျော်ဆန်းက မင်းကို ဖြောင်.....NLD ကို စွပ်စွဲ...
ပြောမနေ ကြနဲ့တော့...ဖုန်းဆက်ပြီးဆဲတာ တောင် ဒီ ငဖါး က အေးဆေးပဲ...ဘယ်လောက်တောင်ရထားလဲမသိဘူး.....
hlaingmin said... :
ဖားမင်းဆွေက လူတော်ကြီးပါလား။ လူပေါကြီးပါလား။ ရုပ်ကြီးကိုက ရေထဲကလာတာထင်တယ်။
ဒီလူကလဲ .. သူ့ဆောင်းပါးကို သူများ အတင်းပေးဖတ်ရတယ်လို့
မရှက်လိုက်တာ .. ဘယ်စာရေး ဆရာကမှ သူတို့ စာတွေကို အတင်းပေးဖတ်တယ် ဆိုတာ မကြားဖူးပါဘူး .. သူ့ကျမှပဲ
သူများမဖတ်ဘူးဆိုထဲက ကိုရေးတဲ့ စာ ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို သိသင့်တယ် ။။
‌ဖေါ်ချင်တဲ့ဆန်ဒကိုအင်အယ်လ်ဒီရုံးမှာ‌ပြောခွင့်ရတယ်..ကျုပ်တို့
အပြစ်မရှိမပြစ်ရှာ... လမင်းကိုခွေးဟောင်သလို ဒေ၀ဒတ်လို ၊ စိဉ္စဏမ မိန်းမယုတ်လို မလုပ်ပါနဲ့ ။ တိရိစ္ဆာန်လောက်အသိဥာဏ်မရှိဘူး ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ်နေမှန်းတောင် သိရဲ့ လား။
နိုင်ငံကို မတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ့ ၊ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ နာမည်လည် ရေးပြီးဝတ်ရဲ့ လား... ဘာနဲ့ ခိုင်းနိုင်းရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး..
အခုလို မြန်မာပြည် အရူးဆုံးလူရဲ့ စောက်ခွက်ကို ဖေါ်ပြပေးတဲ့ အတွက် အေရာဝတီကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလို စောက်ရူးမျိုးတွေက ခေတ်ပြောင်းရင် သူ့ မျက်နှာသူ အိုးမည်းသုတ်ပြီး စစ်အစိုးရ မကောင်းကောင်းပြန်ရေးမယ့် သူပါ။
တကယ့် ကျွန်စိတ်ပြင်းတဲ့ လူတယောက်ပါ။ ဒီလောက်မျက်နှာပြောင် တိုက်ရဲတာ အံသြစရတော့ ကောင်းတယ်။ သူရေးတဲ့ ဆောင်းပါတွေကို လူတွေ ချီးကုန်းပြစ်နေတာ သိလို့သူစိတ်တွေ ဆိုးနေတာလား မသိဘူးနော်။
KoTOE said... :
ဒီကောင်ကငကြောင်.....သူ့ ညီဆိုတဲ့..ယဉ်ထွေးဆိုတဲ့..ငမူးကို...စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးမှာ...၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလဦးပိုင်းမှာတွေ့ လိုက်ရတယ်...၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်ကလွှတ်လိုက်တာတဲ့.....မူးနေပြီးရှောက်ကြွားနေတာ...အဲဒါ..သူတို့ ..linkages ဘဲပေါ.
ခွေးသူတောင်းစား၊ငါးတွတ်ခံရမဲ့၊မင်ဲး့ခစား၊သန်းရွှေတပည့်၊ဆွေဆိုပေမဲ့အဆွေခင်ပွန်းမဲ့သူ၊ ခွေးရူးမင်းဆွေရေ။ မင်းကိုဒီmessage board နဲ့ ဒီမိုကရေစီနေရာအနှံ့မှာစုတ်ပြတ်သတ်ပြီးရစရာမရှိအောင်ဝိုင်းပြီးသမလိုက်
myan myan die par say
ဖားမင်းတွေ ခင်ဗျက အသက်ကြီးသလောက်အချိန်မစည်းတဲ့ ဆန်ကုန်မြေလေး လှူု့ဖားကြီးပဲ ခင်ဗျရေးခဲ့တဲ့ စာတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မပြောနဲ့ ဘယ်သူတောင်းစား ဘယ် အုတ်ကြားမြက်ပေါက်မှ ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူး....ခင်ဗျကြီးကအဠါန်ဖားတဲ့ လူ့ဖားကြီးပဲ ခင်ဗျ သမီးတွေရော ဖား တွေပဲလား....
အထက်က comment ပေးခဲ့တဲ့သူများ နွားမင်းဆွေကို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ရေးပြီးတော့ comment မပေးကြပါနဲ့၊ အဲဒီစာကို ဖတ်ဖို့ သူ့မှာ ဘာသာပြန် ခေါ်နေရအုံးမယ်၊ ဒီမိုကရေစီကို (ဒီမိုးကရေစီး) တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်အဖွင့်ခံထားရတဲ့ လူတစ်ယောက်က နဖားကြိုးအတပ်ခံရတဲ့ နွားနဲ့ မခြားပါဘူးလေ၊ ထွန်ထားအုံးပေါ့ နွားမင်းဆွေရယ်၊
colinmoe said... :
ငါးမင်းဆွေ/ဖားမင်းဆွေကဓါတ်ပုံထဲကကောင်လား သူ.ဆောင်းပါးတွေဖတ်ဘူးတယ် ကြောင်လိုက်တာ ဖားလိုက်တာရုပ်ကိုကကြက်သရေမရှိဘူးsorryနော်ဖာဂေါင်းမျက်နှာပေါက် ဖော်လံဖား ခုဒီကောင်.အကြောင်းcomment ရေးရတာလက်သနတယ် ကျုပ်ကဘယ်ပါတီကမှမဟုတ်ဘူး စော်ကားတာတော.လက်မခံဘူး Daw Aung San Su Kyi is my hero,Her farther also
kms said... :
ခင်ဗျားလုပ်တာနဲ့ လှိုင်မြင့်မိုရ် ရပ်ကွက်တော့ အီးစော်တွေနံတော့မှာဘဲ..( သူ့အိမ်ကို အီးထုပ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းပစ်ကြလို့ )
Dear Myanmar friends,
Let us boycott the Snapshot journal right now. Also don't buy any journal which support military government.
နအဖ လက်ထက်မှာ အဆင်ပြေနေတဲ့ လူတယောက်ပေါ့...... သူ့အခြေအနေပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်တော့ ပျာပျာသလဲ ဖြစ်နေတာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး............ တဦးကောင်း တယောက်ကောင်းဆိုတဲ့ သဘောတရားက ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိတဲ့လူ တစ်ယောက်ကို မြင်ရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်......... နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြေလည်နိုင်မယ့်လူ မြန်မာပြည်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိသင့်တဲ့ အချိန်ကိုရောက်နေပြီ...... နအဖတောင် သဘောပေါက်စပြုနေပြီ.........
အဲဒီနွားမင်းဆွေလာပြီးပြီဆိုရင် သူရပ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ ပရိတ်
November 27, 2010 at 1:03 AM
ရုပ်ကိုက စာမတတ် ပေမတတ် ရုပ်နဲ့။ ချီးထုပ်နဲ့ပေါက်မယ်ဆိုရင်တောင် ထွက်လာမယ့်ချီးကို အောင့်အီးပြီးနေလိုက်မယ်။ စောက်ရမ်း သနတယ်။ ဉာဏ်လေးကလဲ စစ်တပ်ကကျွေးစရာမရှိလို့ ချီးကျွေးပြီးမွေးထားမယ့်ခွေးတကောင်လို ချီးဘရိန်းအတွေးအခေါ်နဲ့။ ကျက်သရေတုံးတယ်
jje said... :
November 27, 2010 at 2:27 AM
စစ်အစိုးရ အမှားလုပ်တာတွေကိုရော အဲလိုသွားပြောလေ ဖားမင်းဆွေ ရဲ့...
ဖာမင်းဆွေရေကွန်မန့် တွေဖတ်ပြီးစိတ်ပျက်မနေနဲ့ ။ခင်ဗျားကိုအားရှိအောင်တစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်မယ်"ရီးပဲ"။မှတ်ချက်("ရ" နေရာတွင် "လ" ကိုအစားသွင်းဖတ်ပါ။
ဒီကောင့်ကြည့်ရတာ ကျက်သရေယုတ်လိုက်တာ...ကိုယ်နဲ့တန်ရာတန်ရာ လုပ်တာ၊ ပြောတာမဟုတ်ဖူး... လကိုဟောင်နေတဲ့ခွေးလိုပဲ... အပေါ်ကကွန်မန့်တွေကပြောတာ နည်းတောင်နည်းနေသေးတယ်
fish min swe =shrimp head min swe
i think thatsaright name for him.we all know who he is, don't blame him, whatever army govt said, he is write it down in newspaper, he is justapuppet from army govt:, i believe he is looks like uneducated and begger.
Big C said... :
November 27, 2010 at 7:22 PM
ငါးမင်းဆွေ ခေါ် ဖားမင်းဆွေ... ခင်ဗျာ ရုပ်ကို..အခုမှ မြင်ဘူးတာ. ရုပ်ကြည့်တာနဲတင်. ခင်ဗျာ ရုပ်က ခင်ဗျာ ရေးတဲ့စာတွေလို. ပေါကြောင်ကြောင်း ရူးကြောင်ကြောင် ..
ဖားမင်းဆွေ အစား ဝစ်စပေါက် ကိုဖြုက်လိုက်ရင် ပိုကောင်း လိမ့်မယ်
November 28, 2010 at 1:43 AM
ဟုတ်တယ် မောင်သာလိကာရေ တို့နိုင်ငံမှာ အာဏာလုပွဲကျင်းပနေတယ် ငါတို့ဒုက္ခရောက်ကြရတယ် တို့နိုင်ငံမှာ ဦးသန်းရွေလဲမရှိဘူးကွာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လဲမရှီဘူးဆိုရင်ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုမင်းမူကြဦးမလဲမသိဘူး အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ဘ၀ကို ဘယ်သူပေးနိုင်မလဲ.......ကြိုက်တဲ့လူအုပ်ချုပ်ကြပါကွာ တို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက် တို့လူမျိုးတွေတိုးတက်ဖို့အတွက် မပြောသေးပါဘူး နိုင်ငံကို ရေမီးလေးမှန်အောင်လုပ်ပေးရင်ကျေနပ်နေမှာပါ... နောက်တစ်ခါ အာဏာလုပွဲမှာအနီုင်ရတဲ့လူကတော့ နောင်ပိင်းကိုဆက်လုပ်မယ်ထင်ပါရဲ့..ခေတ်အဆက်ဆက်အာဏာရှိသူများရောင်းစားလို့မကုန်သေးရင်တော့ နောင်လာနောက်သားတွေစားဖို့ကျန်ပါလိမ့်မယ်
"ကျနော်က အစိုးရကို ဘက်လိုက်ပြီး ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် ရေးသမျှစာတွေက ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ်ရေးတာကပါ။ တချို့
ဆောင်းပါးတွေဆို မျက်ရည်ကျပြီး ရေးခဲ့တာ"
ဒီလူ မရှက်တတ်ဘူးလားမသိပါဘူးဗျာ ဓားပြတိုက်ရင်တောင် ဓားမလိုတဲ့ရုပ်နဲ့ လာနွဲ့ပြနေတယ်
မြိတ်သွားပြီး ကြံ့ဖွံ့ ကို မဲထည့်တဲ့ လွင်မိုး
www.popularmyanmar.com အားလုံးက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲမထည့်ချင်ပဲ ထည့်လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ တမူထူးတဲ့ မင်းသားလွင်မိုးက ကြံ့ဖွံ့ပါ...